पोखरा विमानस्थलमा जहाजमा आगो लाग्यो र मानिसहरु चिच्याउन थाले – Dainik Samchar
March 17, 2021 404
पोखरा एयरपोर्ट नजिकको सडक भएर आवतजावत गर्नेहरु आज साँझ अचम्मित भए । एयरपोर्ट भित्रबाट स्पिकरमार्फत् ठूलो आवाज आइरहेको थियो । भित्र हेर्दा धावनमार्ग नजिकै हवाइजहाज जस्तो आकृति देखिन्थ्यो र त्यसमा दनदनी आगो दन्किरहेको थियो । धुवाँको मुस्लो निस्किएको थियो । एयरपोर्टभित्र ठूलै दुर्घटना भएको उनीहरुले अनुमान लगाए । ठूलो आवाजमा मान्छेहरु ‘हेल्प हेल्प, बचाउ बचाउ’ भनिरहेका थिए ।
मानिसहरु आत्तिए । कसैले दमकललाई, कसैले प्रहरीलाई फोन गर्न थाले । त्यतिनै बेला साइरन बजाउँदै दमकलहरु दौडन थाले । सबैले आज एयरपोर्टमा कुनै अप्रिय घटना भएकोमा निश्चित भए जस्तो लाग्थ्यो । तर, एयरपोर्टमा कुनै पनि अप्रिय घटना भएको थिएन ।
हवाईजहाजको आपतकालिन उद्घार सम्बन्धी अभ्यास भइरहेको थियो । गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् उद्धारकर्मीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले सो अभ्यास गरेको हो ।
बेलुकी चार बजेपछि पोखरा एयरपोर्टमा नमूनाको रुपमा जहाज दुर्घटना गराइयो । त्यसपछि उक्त जहाजमा आगलागी पनि भयो । आगो निभाउनका लागि दमकलको सहारा लिइयो । त्यस्तै, घाइतेको उपचारका लागि एम्बुलेन्स पनि गुडे ।
यी सबै घटना नमुनाको रुपमा गरिएको थियो । अभ्यासका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रसका पदाधिकारीहरु लगायत खटिएका थिए । यसको पूर्व तयारी अन्तर्गत सोमवार र मंगलवार सामान्य अभ्यास समेत भइसकेको थियो । दुर्घटना भएको खण्डमा पूर्वतयारी स्वरुप यस्तो अभ्यास गरिएको हो ।
यस्तै, उद्धार अभ्याससँगै चार दिने विपद् उद्धारकर्मीको क्षमता विकास तालिमको समापन गरिएको छ ।
Prevबिन्ति गरिन सन्तोषीले तर श्रीमानले छोडेनन्
Nextचर्चित लोक गायिका कल्पना दाहाललाई चन्द्र शर्माले नेपाल टेलिभिजनको स्टेजमै यसरी गरे बेइजत (भिडियो हेर्नुहोस्)
भाईरल झाक्रीलाई सर्पको बाण हानेर मा’र्नेको खोजी सुरु,कसले हा’न्यो त सर्पको बाण? (भिडियो हेर्नुस)
आज १३ भदौ २०७८, आइतवार : आजको राशिफल
टिकटकवाट स्टार बनेकी स्मारिकासगं किन भयो डिभोर्स ? विवेक र स्मारिकाले फेसवुक लाइभमा यस्तो भने (भिडियो हेर्नुस्)
स्टुडियोमै कुटिए ऋषि धमला, यी हुन् रामधुलाई गर्ने अतिथि
नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीले गरे विवाहको लिखित सम्झौता ! (2379)
काठमाडौं कोटेश्वरबाट अचम्मका ब्यक्ती पक्राउ ! स्वयम्भु, सीतापाइला, तीनकुने, कागेश्वरी, मूलपानी सबै ठाउँमा भ्याएछन (2363)
खुलाए बिनय र पुजाले आफ्नो अ’न्तरजातीय बिहे गर्नुको का’रण,सम्पतिको लागि बिहे गरिस भन्नेलाइ क’डा ज’बाफ (1780)
कोहलपुर दु’र्घट’ना अपडेट : ५ को मृ’त्यु (1565)
हरिवंश आचार्यको सुझाव- ‘विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा एक टुक्रा जग्गामा खेर नफाल्नुहोस्’ (1497)
आषिश जो कहिलै सकेन्ड भएनन् …जो बाजेको मृ’त्युको १५ दिनमै भगवानको प्यारो भए (1457)
यिनै हुन् जसलाई मिल्यो गुगोल बाट ६० लाखको प्याकेज, आखिर के काम गर्छिन यी युवती ? (1431)
माघे संक्रान्तिको देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरु लाई शुभकामना ?❤️ (1316)